Otu esi edobe otutu otutu (10 isi dị arọ dịka ọmụmaatụ)
1. Mepee uzommeputa (ihe atụ, erikpu 4000g 10 isi weigher, o nwere ihapu ugboro abụọ, oghe uzommeputa nke 2000g) 2. Tụgharịa na peeji nke mbụ nke oke ntọala interface, ịgbanwe lekwasịrị arọ ka 4000g. ...
Otu esi edozi multihead weigher
Basic ọrụ nke mmezi: 1. Hichaa zuru ezu multihead weigher. 2. Lelee ma linear nri pan na-ọma arụnyere, nwere ike ghara okuku na onye ọ bụla ọzọ. 3. Lelee ma ọ bụrụ na nri hopper na-ọma arụnyere. 4. Lelee ma ọ bụrụ na itu hopper ọma arụnyere, kposara na abụọ nke hoppe ...
Development omume nke ọka mbukota igwe n'ọdịnihu dị nso
Dika akụrụngwa dị elu ma kwụsie ike, igwe eji ebu ọka na-etinyekarị na nri nri, mkpụrụ, candies, shuga, tii na wdg. Oke ọsọ na izi ezi. Nke mbu, igwe na-achikota igwe na-achikota nri, nke bu ikike ikike ichikota data na ihe ndi ozo bara uba ....
Ọkwa maka ịzụrụ sistemụ ngwugwu multihead weigher
Ihe edeturu mgbe ị na-ahọrọ igwe igwe eji ebu ọtụtụ isi: 1. iru eru nke onye nrụpụta. Ọ gụnyere mmata nke ụlọ ọrụ ahụ 、 ikike nke nyocha na mmepe 、 ndị ahịa na asambodo. 2. Thedị igwe eji ebu igwe na-ebu ọtụtụ ihe. Ebe ahụ...
Ugboro abụọ ebu System Secondary Lifting mbukota Line
Pụrụ iche Atụmatụ • Ugboro abụọ na-eweli usoro anapụta ihe iji na-eri nri igwe na mbukota igwe iche iche site na ebu. • yodị ndị njem dị iche iche dị maka nhọrọ iji gboo mkpa dị iche iche dị ka nnukwu efere, ihe mbugharị bucke ...
Igwe na-agbakọ ihu igwe VFFS na-akwakọba ihe maka ngwugwu nri
Nkọwapụta SWdị SW-P420 Akpa ogologo 60-300 mm (L) Akpa obosara 60-200 mm (W) Ogologo nke ihe nkiri mpịakọta 420 mm Mbukota ọsọ 5-55 akpa / min Ihe nkiri nkiri 0.04-0.09mm Ikuku oriri 0.8 mpa .. .
New mbukota oru ngo maka obere ibu Ou Mint ifuru
Foto nkọwapụta aha Cannabis mbukota akara Speed ​​40-50bags ...
Firstbọchị mbụ na Sino-mkpọ 2021
Taa bụ ụbọchị mbụ na Sino-mkpọ, nabata ileta anyị na 1.2 / A55. www.smartweighpack.com
Smartweigh laghachi ọrụ site na ezumike CNY taa
Mgbe ụbọchị iri na ise nke ezumike Afọ Ọhụrụ ndị China, Smartweigh mepere taa .Mee maka ajụjụ ọ bụla.
Kedu ihe ekwesịrị ịma tupu ịzụta kọmputa ọtụtụ isi?
1. Ihe achọrọ maka ịdị nha nha / ndidi Iji belata ọnwụ ọnwụ n'oge na-eri nri na mbukota, ndị ọrụ njedebe ga-ahọrọ ịzụta igwe eji ebu ibu na-ebu ọtụtụ isi kama iji aka ha atụ ma na-akwakọba ihe, ha na-ahọrọ ịzụta ogo dị elu nke nnukwu isi Ọ ...
Kedu ka igwe nkwakọ ngwaahịa pellet si arụ ọrụ?
Na arụ ọrụ, otu esi eji igwe eji arụ ọrụ nke ọma ga-ebu ụzọ ghọta n'ụzọ zuru oke ụkpụrụ ọrụ nke akụrụngwa igwe. 1. Ihe a na-abanye hopper na-eri nri site na usoro nri (ọnụ ụzọ pneumatic); 2. Mgbe ị natara ihe mgbaàmà nke ihe mmetụta, ihe nchịkwa ...